Xoghayaha guud ee FIFA oo la eryay - BBC Somali
Xoghayaha guud ee FIFA oo la eryay
13 Jannaayo 2016
Image caption Jerome Valcke.
Ninkan oo ah Faransiis, 55 jir ah, waxaa hore looga mamnuucay hawlaha kubbadda cagta eedo la sheegay inuu ku lug lahaa mashruuc looga faa'iidaysanayay iibin tigidho koobka adduunka.
Waxaa si ku meel gaar ah hawsha looga joojiyay 17 September kaddib markii lagu eedeeyay inuu si isdabajoog ah u jebiyay xeerka anshaxa Fifa.
Ninkan oo jagadaas loo magacaabay sanadkii 2007, ahaana gacanta midig ee guddoomiyaha Fifa Sepp Blatter waa uu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
"Shaqadii xoghayaha guud waxaa sii wadi doona xoghayaha guud ee ku-simaha ah , Dr Markus Kattner," ayaa lagu sheegay hadal Fifa ka soo baxay.
Guddiga anshaxa ee Fifa waxaa uu sheegay 7-dii January inay go'aan ku gaareen in ay dacwad rasmi ah ku furaan Mr Valcke kaddib ay derseen warbixin ay u soo gudbiyeen qaybta baaritaannada ee Fifa.
Valcke waxaa kaloo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa $10m (£6.8m) oo laaluush ahaan loo siiyay Jack Warner, oo madax ka ahaan jiray xiriirka kubbadda cagta ee woqooyiga iyo bartamaha America ee Concacaf, si uu ugu codeeyo una taageero codsigii South Africa ay ku guulaysatay inay marti geliso koobka adduunka sanadkii 2010-kii.
Guddiga anshaxa ee Fifa waxay horeba u soo jeediyeen in Valcke hawlaha kubbadda cagta laga joojiyo muddo sagaal sano ah.
Blatter iyo guddoomiye ku-xigeenka Michel Platini waxaa labadaba shaqada laga joojiyay muddo siddeed sano ah midkiiba bishii December kaddib baaritaan uu sameeyay guddiga anshaxa ee Fifa.
Valcke haatan laba jeer ayay eriday Fifa.
Waxaa uu ku soo biiray xiriirka Fifa sanadkii 2003 isagoo ahaa agaasimaha suuq geynta iyo iyo TV-ga, laakiin waxaa la eryay sanadkii 2006 fadeexad ku saabsanayd sharikadda Mastercard oo muddo dheer ay wada shaqeyn lahaayeen.
Waxaa lagu helay inuu wada xaajood la yeeshay sharikadda Visa oo xafiltan weyn uu kala dhexeeyo Mastercard taas oo xadgudub ku ah sharikadda hore ee Mastercard, ugu kacday Fifa $90m (£61.3m) si arrintaas loo xalliyo.